नेकपाको एकलौटी विजय, कहाँ कस्को जित ? « Nijamati Khabar
नेकपाको एकलौटी विजय, कहाँ कस्को जित ?
काठमाडौं, १० माघ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा नेकपा गठबन्धन विजयी भएको छ। विहिबार भएको निर्वाचनमा स्थानीय तहतर्फ ९९.१९ प्रतिशत मतदान भएको थियो । निर्वाचनका लागि मुलुकका सातै प्रदेशका उच्च अदालत रहेका जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा गरिएको थियो ।
बिहीबार १८ पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपाका १६ र राजपाका २ उम्मेदवार निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश २ मा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बीच गठबन्धन भएको थियो ।
सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने महिला समूहतर्फ ७, दलिततर्फ २, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकतर्फ २ र अन्यतर्फ ७ गरी १८ रिक्त पदमा मतादान भएको हो । निर्वाचनमा विपक्षी कांग्रेसले ७ वटै सिट गुमाएको छ ।
परिणाम अनुसार प्रदेश नं १ मा नेकपा विजयी भएको छ । यहाँको तीन पदका लागि भएकोे निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का तीन उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । यसरी विजयी हुनेमा महिलातर्फ इन्दिरा गौतमले ६ हजार ४२६, दलिततर्फ गोपी आछामीले ६ हजार ३३० र अन्यतर्फ देवेन्द्र दाहालले ६ हजार २३४ मतभार ल्याई विजयी भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी तीर्थ अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य ९३ मध्ये ९२ तथा स्थानीय निकयका २७४ मध्ये २७२ सदस्यले मतदान गरेको निर्वाचन अधिकृत अधिकारीले बताए । प्रदेशसभा सदस्यले ९९ प्रतिशत तथा स्थानीय निकायतर्फ ९८ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको अन्य समूह र महिला सदस्यमा क्रमशः सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का तारामान स्वाँर र शारदा भट्ट निर्वाचित भएका छन् । स्वाँरले ३ हजार ७२० मत प्राप्त गरी विजयी भए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका प्रताव ठगुन्नाले २ हजार ८४ मत प्राप्त गरे ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बेदुराम भुसाल र महिलामा गंगाकुमारी बेलबासे निर्वाचित भएका छन् । भुसाल ६ हजार ८ सय १० मत ल्याएर विजयी भए भने बेलबासेले ६ हजार ८ सय २८ मत ल्याएर विजयी भएकी छिन्।